Uyenza njani ifayile yeSVG | Abadali be-Intanethi
Xa udala iwebhusayithi, umyili wewebhu kufuneka athathele ingqalelo iingongoma ezine eziphambili ukucinga malunga noyilo kunye noyilo olubonakalayo lwewebhu, i umbhalo, imifanekiso, imibala kunye neefonti abasebenzi.
Kula manqaku mane, eyona nto siza kunika ibaluleke kakhulu kule post yimifanekiso, kuba siza kuthetha ngayo. uzenza njani iifayile zesvg kuba kubaluleke kakhulu ukuthathela ingqalelo umgangatho wemifanekiso osebenza ngayo.
Unyango ngeefayile zeSVG, iye yanda ziingcali kwaye akunjalo kwiingcali kwihlabathi loyilo.
1 Yintoni ifayile yeSVG?
2 Kutheni le nto kufuneka sisebenzise i-SVG?
3 Uzenza njani iifayile zeSVG ngokulula
Yintoni ifayile yeSVG?
I-SVG sisishunqulelo sesiNgesi seScalabe Vector Graphics, ngeSpanish, iScalable Vector Graphics. Imalunga ne-a ifomati evulekileyo nesimahla yokwenziwa ngayo imizobo ye-2D, imilinganiselo emibini.
Ngokungafaniyo nezinye iifomati zemifanekiso, njengeJPG okanye iPNG, I-SVG yifomati enokukala, kungakhathaliseki ukuba ufuna ukunyusa ubungakanani bayo, ekubeni umgangatho womfanekiso uya kugcinwa. Yenye yeefomati ezisetyenziswa kakhulu kumaphepha ewebhu ukubeka imizobo okanye imifanekiso yevektha.
Kutheni le nto kufuneka sisebenzise i-SVG?
Ngolu hlobo lwefomathi, imifanekiso ye-vector iya kugcina umgangatho ophezulu, kungakhathaliseki ubungakanani babo kunye nesisombululo. Ngokuchasene noko, imifanekiso eyenziwe ngee-bitmaps, eyenziwe ngeepikseli, ilahlekelwa ngumgangatho ukuba iphindwe kabini. Ifomathi ye-SVG ichazwa ngokukhaphukhaphu kunye nokuguquguquka kwayo.
Enye inqaku ekuthandeni ukusebenzisa le fomati bubungakanani bayo obuncinci, oko kukuthi, enkosi kule kwandisa isantya sokulayisha samaphepha apho akhoyo. Le mifanekiso yakhiwe ngumkhangeli zincwadi, onceda ukunciphisa umthwalo kunye nokusetyenziswa kumncedisi.
Ukongezelela, banako yenza imifanekiso yeSVG yoopopayi esinokuthi sinikeze ngayo iwebhusayithi yethu umoya wokusondela kwaye sitsale ingqalelo yababukeli abayindwendwelayo.
I-SVG yifomathi evuliweyo, oko kukuthi, inokuphucula kunye nohlaziyo. Ukongeza, iifayile ze-SVG zinokuhlelwa ngeenkqubo zokuhlela i-vector, umzekelo i-Adobe Illustartor ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho ekuboniseni kwayo, inokujongwa nakwesiphi na isixhobo. Ikwasivumela ukuba siyiprinte ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho.
Uzenza njani iifayile zeSVG ngokulula
Mhlawumbi eyona ndlela ilula yokwenza iifayile zeSVG, ukuba uqhelene nazo, kungenkqubo yoyilo lwegraphic, njenge Illustrator, Corel Draw, phakathi kwabanye.
Ukugxininisa kwiprogram ye-Illustrator, xa siza kusebenzisa ifomathi ye-SVG, kufuneka sithathele ingqalelo ukuba sisebenzise i-gradients okanye ezinye iziphumo, ezifana nefuthe lobugcisa, ukufiphala, iibrashi, ipixels, njl. njengoko zenziwe rasterized xa zigcinwe kwifomati yefayile yeSVG. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise iziphumo zokucoca i-SVG, ukongeza iziphumo ukuze zingabi nakwenziwa rasterized kamva.
Elinye icandelo lengcebiso esikunika lona kukusebenzisa iisimboli ezilula kunye neendlela kwimifanekiso yokusebenza ngcono yohlobo oluxeliweyo. Kuphephe ukusebenzisa iibhrashi ezinokulandelela okuninzi njengoko oku kuvelisa umthwalo ophezulu wedatha.
Ukwenza ifayile yeSVG kule nkqubo, Into yokuqala ekufuneka siyivule yilaphu engenanto apho siya kusebenza khona kwimbono yethu.
Nje ukuba umsebenzi wethu ugqityiwe, into esiya kuyenza kukuya kwibar yesixhobo eboniswe ngaphezulu kwenkqubo, kwaye siya kukhetha ukhetho ifayile, gcina njenge, kwaye i-pop-up screen iya kuvela apho isixelela ukuba sinike ifayile yethu igama kwaye ubonise ifomathi esifuna ukuyigcina ngayo. Kukweli candelo lokugqibela apho kufuneka siphawule ukhetho lwe-SVG.
Xa ukhetha uhlobo lwe-SVG, ibhokisi yencoko yababini ibonakala isibonisa iinketho ezahlukeneyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Njengomgaqo jikelele, kwintsimi yokuqala evela kwitheyibhile, iprofayili ye-SVG 1.1 ibonakala. Kule ilandelayo isinika ukhetho lokukhetha imithombo, apho basinika khona okumiselweyo kokubhaliweyo okuphawulwe kwi-SVG kunye neseti esezantsi njengenye. Kwimeko yethu, lo msebenzi awunamagama, ukuba uyenzile, ukhetho lweeseti ezisezantsi kuya kufuneka itshintshwe ingabikho kuzo zonke iipictograms.
Eli candelo lilandelayo libaluleke kakhulu, ukuba sikhankanya ukhetho lokulungisa, imifanekiso yokwakheka izakufakwa kwifayile, eya kubangela ukuba ifumane ubunzima ukuba sisebenzisa imifanekiso emininzi ye-bitmap. Ukuba, kwelinye icala, siphawula ukhetho lokudibanisa, kufuneka silumke ngemifanekiso ukuba siza kuyisebenzisa kwiwebhusayithi, kuba kufuneka sibandakanye iifayile zemifanekiso yethu, kwaye, kubaluleke kakhulu, sigcine indlela. Inzuzo yolu khetho kukuba iifayile ziya kuba nobunzima kakhulu.
Kwicandelo leenketho eziphambili sifumana inketho yoku Ikhowudi yeSVG, olu khetho luyakubonisa indlela ifayile engaphakathi, oko kukuthi, ikhowudi emva komsebenzi wethu. Olu khetho lubalulekile ukuba ufuna ukongeza ifayile yakho ye-SVG, umzekelo kwi-WordPress yakho, kufuneka nje ukopishe ikhowudi kwaye uyongeze ngokuthe ngqo kwi-WordPress HTML umhleli wakho.
Ingcebiso yokugqibela esikunika yona kukuba xa ugcina ngefomathi yeSVG, gcina engqondweni ukuba usebenza ngeebhodi zobugcisa ezahlukeneyo, yibhodi yobugcisa esebenzayo kuphela eya kugcinwa.
Ukuba sifuna ukuya phambili kwaye sisebenzise iziphumo ze-SVG kumzekeliso wethu, i-Illustrator isinika iseti yeziphumo. Ukwenza oku, kuya kufuneka sikhethe into okanye iqela. Ukusebenzisa isiphumo kufuneka sikhethe iwindow yeziphumo, izihluzi zeSVG kwaye sisebenzise.
Xa usebenzisa isihluzo seSVG, inkqubo yoyilo isibonisa ifestile apho Uluhlu lwezihluzo ezinokusetyenziswa luyavela., xa sikhetha enye, uMzobi usibonisa indlela ekhangeleka ngayo, kodwa kuguqulelo lwerasterized.
Njengoko ubonile, i ifomathi ye-SVG ibe yinguquko. Ndiyabulela kwisakhono sayo kunye nomgangatho enikezelayo, yenza amaphepha ewebhu esiwafumana enomtsalane ngakumbi ngaphandle kokuncama ukusebenza, okoko nje esebenzisa ngokuchanekileyo ifomathi exeliweyo. I-SVG ibe lumanyano olugqibeleleyo phakathi kwelizwe loyilo kunye nophuhliso lwewebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani ifayile yeSVG